LGD-2226 အမှုန့် (328947-93-9) hplc≥98% | AASraw SARMS အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / SARMS / LGD-2226 အမှုန့်
SKU: 328947-93-9. အမျိုးအစား: SARMS
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ LGD-2226 မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (328947-93-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
အပေါ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ LGD-2226 အမှုန့် နှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပေမယ့်ကနဦးစမ်းသပ်မှုတွေဓာတုအရိုးနှင့်ကြွက်သားတစ်သျှူးအပေါ်အချို့သောဟိုသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းပြသပြီ။ LGD-2226 အမှုန့်များအတွက်အကြီးမားဆုံးပေါင်းသော်လည်းစမ်းသပ်မှုတွေယခုအချိန်အထိကစတီရွိုက်နှင့်အခြား SARMs နှိုင်းယှဉ်ဆီးကျိတ်နှင့် luteinizing ဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်အတော်လေးနည်းပါးလာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ပြဘူးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်း LGD-2226 အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: LGD-2226 အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 187-190 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
SARMS သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း LGD-2226 အမှုန့်
LGD-2226 အမှုန့်အရိုးပွရောဂါနှင့်ကြွက်သားပိန်၏ကုသမှုများအတွက်တီထွင်ထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးတစ်ဦးရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုသည်နှင့်လည်းကာယဗလများအတွက် steroids ၏အသုံးပြုမှုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
LGD-2226 အမှုန့်တစ်နှုတ်အုပ်ချုပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ရေကို အသုံးပြု. ခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ် juice.The လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအထူးသဖြင့်ဖြတ်တောက်, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် recomping, သူတို့ရဲ့ bulk ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် SARM အသုံးပြုချင်စခွေငျးငှါအဘယ်သူသည်လူတို့အဘို့, ဆဲသောက်သုံးသောဒဏ်ငွေ tuning များမှာရပါမည်။ သို့သော်ထိုသို့သောက်သုံးသောသတင်းအချက်အလက်ထွက်ကြွလာသည်အထိရှည်လျားဖြစ်မသွားပါ။
အဘယ်အရာကိုရလဒ်များအမျိုးအစားများငါရော် LGD-2226 အမှုန့်ကနေမျှော်လင့်နေရမည်
LGD-2226 အမှုန့်များ၏ဟိုအရေးယူမှုအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်မြင်ကြပြီ။ ဤသည်အသုံးပြုသူများတုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်ဟိုစတီရွိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မရှိဘဲလျင်မြန်စွာအဆီဆုံးရှုံးအတွက် SARM သုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ဒါဟာအစအဟောင်းတွေလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူကလူတို့အဘို့အရိုးသိပ်သည်းဆမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အရိုးအခြေအနေများရှိသူများသည်သူတို့ကအလွယ်တကူ LGD-2226 အမှုန့်သံသရာမှအကျိုးနိုင်ဘူး။
LGD-2226 အမှုန့်ကိုလည်းအကြီးအကျယ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအာနိသင်တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်လုံသည့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့် LGD-2226 အမှုန့်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသင်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ SARM လည်းအီစရိုဂျင်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့် testosterone ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
LGD-2226 အမှုန့်ကိုလည်းအထီးသည်အသုံးပြုသူများအကြားလိင်စိတ်တိုးတက်အောင်အတွက်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့မြင်ကြပြီ။ virilization ၏အန္တရာယ်ကများလွန်းမိန်းမတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအောင်ရှိလည်းမဟုတ်ဘူး။
ဘယ်လိုကုန်ကြမ်း LGD-2226 အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
LGD-2226 အမှုန့်ပဲမဆိုအခြားတူသောအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့အစွမ်းထက်နှင့်နှုတ်တက်ကြွ SARM ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် SARM ကြွက်သားများနှင့်အရိုးဆဲလ်တွေပစ်မှတ်ထား။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မလုံလောကျရှိရာကိစ္စများတွင်အန်ဒရိုဂျင်အက်ရှင်ဖြစ်ပေါ်အောင်ကူညီပေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးထုံးစံနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင် testosterone ဟော်မုန်းကိုထုတ်လုပ်, ဟော်မုန်းလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သက်လုံတက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအန်ဒရိုဂျင်အက်ရှင်ဖြစ်ပေါ်ဖို့လုံလောက်တဲ့မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီအပြင်, ကြွက်သားပိန်ဖို့ဦးဆောင်ပိုဆိုးကိစ္စတွင်အခြေအနေတွေ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါနည်းနည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထုတ်လုပ် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်။ LGD-2226 အမှုန့်သမျှသောဤကိစ္စများများအတွက်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ testosterone ဟော်မုန်း၏ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုနဂိုအတိုင်းကျန်ရှိနေဆဲသေချာစဉ်က၎င်း၏ရွေးချယ်အရေးယူကြွက်သားဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့အန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ကာယဗလများအတွက်, ဒီပိုကောင်းရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီနိုင်သည်။
SARMS သို့မဟုတ်ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor Module အလားတူဟိုစတီရွိုက်နှင့် prohormones အနုတ် steroids ဆောင်ကြဉ်းဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် androgensthat အလုပ်၏လတ်ဆတ်သောအတန်းအစားဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဘေးကင်းခြင်းနှင့်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်မှာကနျြးမာရေးချပြီးမပါဘဲလုံတိုးမြှင့်အတွက်ပိုပြီးထိရောက်ဖြစ်သကဲ့သို့အတော်များများအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလ SARMS မှ switched ပါပြီ။
ကြွက်သားပိန်နှင့်အရိုးပွရောဂါများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းအဖြစ်တီထွင်လျက်ရှိကြောင်းယင်း၏ Pre-လက်တွေ့အဆင့်တစ် SARM - ယနေ့လှိုင်းတံပိုးအောင်ကြောင်းတစ်ခုမှာ SARM LGD-2226 အမှုန့်သည်။ ပြန်ကြားရေးနေဆဲန့်အသတ်, ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ယခုအချိန်တွင်၏အဖြစ် LGD-2226 အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိပါတယ်။
LGD-2226 အမှုန့်ကြွက်သားများနှင့်အရိုးတစ်ရှူးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဟိုသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သောအန်ဒရိုဂျင် receptor များ (AR) အတွက်တစ်ဦးနှုတ်, တက်ကြွအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် agonist ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဆီးကျိတ်အလေးချိန်နှင့် luteinizing ဟော်မုန်းအပေါ်သိသိသာသာနည်းပါးလာသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ (အထုတ်လုပ်နေတဲ့ဟော်မုန်း ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက် pituitary gland) comparedto testosterone ဟော်မုန်းအဖြစ်အဆင့်ဆင့်။
ယောက်ျားနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အရိုးပွရောဂါ၏ကုသမှုမှတစ်ဦးကဝတ္ထုချဉ်းကပ်မှု, ဆီးကျိတ်အတွက်သိသိသာသာလျော့တီထွင်ခဲ့တယ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသစ်ကိုအရိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလှုံ့ဆော်နိုင်သောရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor Module (SARMs) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အဖြစ်အမျိုးသမီး virilizing လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အတော်ကြာကျော်, ငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသောကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့ပေးတ္ထု, Non-တီးရွိုက်, နှုတ်-တက်ကြွရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor Module (SARMs) နှင့်အန္တရာယ်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလျှော့ချဖို့အစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများတှငျကြှနျုပျတို့အထီး LGD2226 များ၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ဘို့ hypogonadism တစ် nonsteroidal non-aromatizable နှင့် Non-5alpha-လျှော့ SARM ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အဖြစ်အရိုးရင့်ကျက် orchiectomized (ORX) အထီးကြွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ LGD-2226 powderon အရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်, အရိုးထုထည်များနှင့်အရိုးအစွမ်းသတ္တိ၏လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်များနှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောဆီးကျိတ်, ဟောပြောမှုတွေတွေ့နေကျမဟုတ်သောအများနှင့်ကြွက်သားအဖြစ်ဂန္အန်ဒရိုဂျင်-မှီခိုပစ်မှတ်ပေါ်တွင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ အရိုးသိပ်သည်းဆတစ်သိသိသာသာအရှုံးပေါ် ORX တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်, ဤဆုံးရှုံးမှု SARMs အဖြစ်စံအန်ဒရိုဂျင်များကတားဆီးခဲ့ပါတယ်။ အရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးအမှတ်အသားများတစ် 2226 လကုသမှုကာလအတွင်းသည်ပါးစပ် SARM, LGD4 နဲ့ကုသ ORX တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဖိနှိပ်ခဲ့ကွောငျးအန်ဒရိုဂျင်-လစ်လပ်ကြွက်များတွင်အရိုး resorption ၏အစောပိုင်းတိုးဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဗိသုကာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အရိုးခွန်အား၌ကွာခြားချက်များအန်ဒရိုဂျင်-လစ်လပ်ကြွက်များတွင် LGD-2226 powderon အရိုးအရည်အသွေးအကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြ, histomorphometric နှင့်စက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ cortical အရိုး၏ Histomorphometric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ periosteal အရိုး powderin LGD-2226 ၏ကွဲပြားဟိုလှုပ်ရှားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။ LGD-2226 လည်းအရိုးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ဟန့်တားနေစဉ်, အရိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်အရိုးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးနှင့် ORX ကြွက်များတွင်အရိုးအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင် powderwas ။ LGD-2226 powderalso အဆိုပါ levator ani ကြွက်သားပေါ်မှာဟိုလှုပ်ရှားမှုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီရလဒ်တွေကိုနှုတ်-တက်ကြွ, Non-တီးရွိုက် SARMs သူတို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ hypogonadal အမျိုးသားများတွင်ကြွက်သားနှင့်အရိုးနှစ်ခုလုံးအတွက်အသုံးဝင်သောဟော်မုန်းဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ SARMs အရိုးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးများနှင့်လည်းအသစ်သောအရိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလှုံ့ဆော်နှစ်ဦးစလုံးကတည်းကသူတို့လက်ရှိအသုံးပြုသော Anti-resorptive ကုထုံးမှဆွေမျိုးသိသိသာသာအားသာချက်များရှိနိုင်ပါသည်။ ကြွက်သားအတွင်းရှိ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုနဲ့လိင်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ် restore ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်နှင့်အတူ coupled, သူတို့ကယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဟော်မုန်းအစားထိုးအသစ်ကုထုံးချဉ်းကပ်ပူဇော်လော့။
LGD-2226 ကုန်ကြမ်း Powder
ကုန်ကြမ်း LGD-2226 အမှုန့်စျေးကွက်
ရော် LGD-2226 အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
LGD-2226 အမှုန့်အသုံးပြုခြင်း၏အဘယ်သူမျှမလူသိများဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေဆဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာ SARM သည်လက်ရှိတွင်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိကြောင်းထပ်လောင်းအတည်ပြုရန်အရေးကြီးပါသည်နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေနေဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်အသုံးပြုသူများကစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပါတယ်ယုံကြည်ဖို့မလိုပါဖြစ်ပါတယ်။
AASraw ထံမှ LGD-2226 အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
LGD-2226 ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
သငျသညျယ်ယူရန် LGD-2226 Powder ခင်မှာသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို
S4 (Andarine) အမှုန့်